Sida looga baxo Google Chrome ee loogu talagalay Android | Androidsis
Google Chrome wuxuu noqday biraawsarka ugu isticmaalka badan adduunka, ma aha oo kaliya qalabka moobiilka, laakiin sidoo kale kombiyuutarada, oo leh saami gaaraya 60%. In kasta oo ay run tahay inaysan ahayn biraawsar xun, raadraaca joogtada ah ee ay ku sameyso dhammaan baaritaannada aan sameyno, ayaa ah walaac sii kordheysa oo muhiim u ah dadka isticmaala ee daneynaya ilaalinta asturnaantooda.
Si aad isugu daydo inaad noo fududeyso markii aan soo saareyno taleefan casri ah oo cusub, markaan ku soo galneyno koontadayada 'Gmail', tan si toos ah loola xiriiriyaa dhammaan codsiyada Google, Hawl aad u fiican oo adeegsadayaal badan oo aan u baahnayn inay maraan nidaamka si isdaba joog ah mar kasta oo ay isticmaalaan barnaamij shirkadeed. Laakiin sidoo kale waxay khatar ku tahay asturnaantayada.
Aniguna waxaan idhaahdaa waxay khatar u tahay asturnaantayada, tan iyo Google waxay diiwaangelisaa dhammaan howlaha aan ku qabanno barnaamijyadaada, gaar ahaan biraawsarka Chrome. Haddii aan si joogto ah ugu adeegsanno kumbuyuutarkaaga kumbuyuutarka, oo aan ku galno isla koontadaada casriga ah, waxay u badan tahay in iswaafajinta taariikhda calaamadaha iyo kuwa kaleba ay waxtar u yeelan doonaan.
Haddii, dhanka kale, aad kaliya u isticmaasho Chrome-ka Android ama aadan ku isticmaalin kombiyuutarkaaga desktop inta aad ku jirto xisaabtaada, waad xiiseyn kartaa jooji xogta aad siineyso Google.
Ka bax Google Chrome ee Android
Marka hore waxaan tagnaa xulashooyinka qaabeynta ee ku yaal geeska midig ee kore ee biraawsarka.
Marka xigta, guji qaabeynta iyo magacayaga isticmaalaha.
Kadib Chrome waxay noo ogolaaneysaa inaan ku darno isticmaaleyaal kale, si marka dadka kale ay u adeegsadaan, taariikhdu wali ugu kaydsan tahay akoonadooda.
Si aad u baxdo, waa inaan gujino ikhtiyaarka ugu dambeeya ee laga heli karo menu-kan la yiraahdo Ka bax Chrome.
Sidan oo kale, dhammaan taariikhda raadinta iyo bogagga shabakadda ee aan booqano waxaa lagu keydin doonaa oo kaliya bartayada, kuma jiro akoonkeena Google.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida looga baxo Google Chrome ee Android